बालविवाहले खोसियो बालापन | Mechikali Daily
बालविवाहले खोसियो बालापन
Posted By: Mechi Kalion: ३ बैशाख २०७४, आईतवार ०६:१७
बुटवल, । रुपन्देही मर्यादापुरकी सुनीता चौधरी को ८ वर्षमै विहे भयो । त्यो बालापनमा विहे हुँदा उनलाई विहे भन्ने के–हो ? भन्ने ज्ञान थिएन । ककरा पढ्ने उनको त्यो उमेर मा आमा बुवाले विहे गरिदिए । उनी माइतमा बसेर पढ्दै थिइन् । त्यसको ५ बर्षपछि उनको गौना गरिदिए । गौना गरेपछि उनि पतिको घर जानुपर्ने भयो । तर उनको पतिको घरमा जान मनै थिएन । तर पनि उन बाध्य भएर गइन् । नगए बाबु आमाको इज्जत जाने भन्दै घरबाट निकै दबाव भयो । उनको गौना हुनुभन्दा केही दिन अगााडि उनको र पतिको झगडा भएको थियो । यो कुरा उनले आफ्नो आमा बुवालाई पनि बताइन् तर सुनुवाइ भएन । गएको दुईतीन महिनामै उनी घर छोडेर माइतमा आउन बाध्य भइन् । अहिले उनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहान्छिन् तर बावु आमाले घर जानुपर्छ भन्छन् ।
उनी –भन्छिन् मलाई विहे भन्ने थाहा थिएन विहे भयो । तर विस्तारै केही कुरा बुझदै थिएँ । मैले आमाबाबाको करले गौना गरेँ । म पढ्दै थिएँ । मानसिक तनाव सिर्जना भयो । मैले धेरै सहेरे घरमा सबैको स्याहार सुसार गर्नुपथ्र्यो । पतिसंँग झगडा गरी मैले दुईतीन महिना घरमा बिताएँ । दिनहरु बित्दै थिए । मेरो मनले पनि विहे बुभ्mदै थियो । मलाई पीडा हुन्थ्यो,मेरो विहे किन गरिदिए बाबु र आमाले ? मलाई यहीँ प्रश्नले सताइरहन्थ्यो । यी यस्तै कुराहरु धेरै सोचे मैले सहनै नसक्ने गरी पीडा भयो र मलाई बाच्न मन लागेन । पर्सि गौना गर्ने दिन थियो । आज मैले बजारबाट तरकारीमा हाल्ने बिष ल्याएर आएँ अनि खाएँ,तर म बाचँे । मलाई मेरो घर परिवारले छिट्टै अस्पताल लैजानुभएछ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा तीन दिनसम्म औषधि उपचार गरेपछि घर फर्किएँ । म पतिको घरमा जानै चाहादिनथेँ र मैले बिष सेवन गरेँ, तर पनि मेरो परिवार इज्जतको कारण गौना गर्नुपर्छ भन्दै गरिदिए उनी मलिन् हुँदै सुनाइन् ।
मैले मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै आएँ । म दिड्स कलेज बुटवलमा एनम् पढ्थँे । म बुटवलनै बसेर पढेकी थिएँ । पतिले मलाई फोन गरेर तनाव दिन्थ्यो । ऊ भन्थ्यो पढेका केटीको इज्जत हँुदैन । तेरो र मेरो सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ भन्दै बारम्बार फोन गथ्र्यो । तर पनि मैले पढ्न छोडिनँ । म एक्लै रुन्थँे । २०७१ मा मैले एनमी सक्काएँ । मैले पढ्नको लागि धेरै संर्घष गरेँ र आज मैले यसरी मेडिकल खोलेर बस्न सके । यो मेरो खुसीको कुरा हो, तर समाज अझैपनि बुझेको छैन । जुन समाजमा म पनि छु । अहिले धेरै परिवर्तन भैइ सककको त छ,तर पनि सोचेको जस्तो परिवर्तन आउन सकेको छैन । मैले धेरै सोचविचार गरेर निण्र्नय गरेको छु । म त्यो घरमा जान चाहादिनँ । मैले उसंँग को सम्बन्ध तोडेर बस्न चाहेको छु । मैले मेरो घरमा बुझाउन सकेको छैन । सबैको सल्लाह र सहयोग लिएर यो सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेछु । अहिले मलाई आफूले केही गर्नुपर्छ र आत्मविश्वास हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । ममा पनि केही गरेर खान सक्ने सीप र क्षमता छ । त्यसैले मैले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहान्छु ।
। बालविवाह गर्न नहुने कुरा पनि जान्दै गएका छन् । तर बढ्दै गएको दाइजोको प्रचलनले बालविवाह रोकिएको छैन । अझैपनि धेरै छोरीहरु यौवनावस्थामा प्रवेश नगर्दै विहे गर्न बाँध्य छन् । छोरीहरुको पढाइ पनि बीचमै छुटेको छ । महिला अधिकारकर्मी मीनाक्षी न्यौपाने अनुसार यहांँको मधेशी समुदायमा दुलाहको पढाइ र पेशा अनुसार विवाहमा दाइजो दिने चलन छ । दुलाह ईन्जिनियर भए १५ लाख बढी , डाक्टर भए १२ लाख बढी , ओभरसियर र अधिकृतस्तरको भए १० लाख , र त्यसभन्दा तल्लो जागिरे भए ५ लाख बढी दिनुपर्छ । कुनै काम या जागिर नभएको दुलाह भएपनि १ लाख रुपैयाँसम्म नगद दाइजो र उसले रोजेको सवारी दिनै पर्ने किटान हुन्छ । नदिए हुनै लागेको विहे पनि रोकिन्छ । ‘सानैमा छोरीको विहे गर्दा त दुलाह पनि सानै हुन्छ । उसको माग धेरै हुँदैन । त्यसैले धेरै अभिभावकहरु छोरीलाई पढाएर विहेको खर्च बढाउन खोज्दैनन्, न्यौपानेले भनिन् । पढेकी छोरीलाई सुहाउँदो केटो खोजेर विहे गराउंँदा दिनुपर्ने दाइजोको डरले यहाँका विपन्न मात्र होइन सम्पन्न अभिभावकहरुले पनि छोरीको विहे सानैमा गरिदिने गरेको मर्चवार गाविस सामाजिक परिचालिका अकालमती पालले बताइन् । ‘दाइजोको चलन कम नभएसम्म बालविवाह रोकिने छाट देखिँदैन ।’ उनले भनिन्, ‘ पढाइमा खर्च र विहेमा खर्च दोहोरो खर्च व्यहोर्नु भन्दा सानैमा छोरीको विहे गरेर पठाउँछन् ।”